Kooxda Borussia Dortmund oo doonaysa in xiddig ka tirsan Chelsea ay dib ugu celiso horyaalka Bundesliga - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 16, 2021 at 11:07 Kooxda Borussia Dortmund oo doonaysa in xiddig ka tirsan Chelsea ay dib ugu celiso horyaalka Bundesliga2021-09-16T11:07:27+02:00 CAYAARAHA
(Dortmund) 16 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa la soo warinayaa inay doonayso in xiddig ka tirsan Chelsea ay dib ugu celiso horyaalka dalka Jarmal ee Bundesliga, sida lagu daabacay Wargeyska Bild.
Wargeyska Bild ee dalka Jarmalka ayaa warinaya in Kooxda Dortmund ay doonayso inay horyaalka Bundesliga dib ugu soo celiso Weeraryahanka Chelsea ee Timo Werner.
Dhaliyaha Kooxda Chelsea ee Werner ayaan weli si wanaagsan u saldhigan Magaalada London, waxaana laga yaabaa inuu aqbalo inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo.
Borussia Dortmund ayaa qaadan karta Weeraryahanka Chelsea ee Timo Werner, iyagoo doonaya inay xagaaga soo socda dib ugu soo celiyaan horyaalka Bundesliga, sida uu warinayo Wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka, maadaama sida Wargeysku leeyahay ay Dortmund isku diyaarinayso bixitaanka Erling Haaland.
Werner ayaa ka soo ciyaaray Kooxda RB Leipzig ka hor inta uusan u dhaqaaqin Naadiga reer England ee Blues, laakiin tan iyo markaas kalsoonidiisa ayuu lumiyey, waxaana uu qaab ciyaareed liita kala soo muuqday horyaalka Premier League.
Si kastaba ha noqotee, ku soo biirista Romelu Lukaku ee kooxda Chelsea ayaa hoos u dhigtay oo xiddiday safashadii Werner ee Naadiga ka dhisan garoonka Stamford Bridge.
« Yaa la wareegay dhulkii lagu dagaalamay ee Banaadir?
RASMI: Bayern Munich oo heshiiska u kordhisay mid ka mid ah xiddigihii la la xiriirinayey Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United »